Xafiiska Puntland – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
July 27, 2019 Xafiiska Puntland 0
Wararka inaga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in xaalada caawa ay dagan tahay kadib dagaal saacado badan qaatay oo kadhacay duleedka magaalada Ceerigaabo. Dagaalka ayaa si toos ah ugu dhaxeeyay ciidamada Somaliand iyo […]
Wariye Mo Yousof Bakayle oo maalmihii oo danbeeyay aad u dhaliilaayay Dawladda Federal-ka iyo madaxdeeda iyo sidoo kale dadka reer Mogadishu ayaa xalay Xabsiga loo taxaabay. Horay wuxuu u dhaliili jiray Soomaaliland iyo madaxda Xisbiga […]
July 27, 2019 Xafiiska Puntland 1
In ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo qorshuhu ahaa in saaka la geeyo magaalada Dhuusamareeb ayaa sida la sheegayo lagu baajiyay amar ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb […]
July 27, 2019 Xafiiska Puntland 2
Maxkamad ku taalla Dalka Maraykanka ayaa sheegtay Qoyska Akasha oo ah Qoys reer Kenya ahi ay xidhiidh Ganacsiga Hubka ah la leeyihiin kooxda Al-shabaab. Gar-yaqaan Maraykan ah oo Magaciisu yahay Geoffrey Berman ayaa Maxkamadda u […]
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay hadal u jeediyay Qorayaal lagu marti-qaaday bandhiga Buugaagta Garoowe, ayaa si kooban u fasiray farriinta uu dirayo qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Madaxweyne Deni, ayaa sheegay […]
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka hadlay shaqaaqada colaadeed ee muddada ka taagnayd deegaanka Ceel-Afweyn iyo guud ahaanba gobolka Sanaag, waxana uu bulshada ugu bushaareeyey inay arrintaasi marayso marxalad farxad iyo yididiilo badan. […]
DAAWO: Jabhadda Caare iyo ciidanka Somaliland oo markale ku dagaalamay duleedka ceerigaabo.
wararka ka imaanaya tuulada Karin oo hoostagta degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ayaa sheegayaa in halkaasi uu saaka dagaal ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo jabhadda la baxday DULMIDIID ee uu hoggaamiyo Col. Siciid Cawil Jaamac […]
nimada Ururka Shaqaalaha Adduunka Isku Day Afgambi Oo Ka Dhacay Gobolka Amxaarada Ethiopia Trump Oo 6 Bilood Kadib Ka Hadlay Booqashadii Xaaskiisa Ee Ahraamta Masar Hay’adda Barakacayaasha Iyo Qaxootiga S/land ayaa Soo Bandhigtay Qorshaha ay […]
RWasaaraha Galmudug oo si kulul uga hadlay wixii kadhacay Muqdisho.
July 24, 2019 Xafiiska Puntland 0
Madaxa xukumada galmudug Dr sheikh mohamed shakir ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehellada iyo dhamaan shacabka somaliyed. “Innaa Lillaahi Wa Inaa Ilayhi raajicuun. Anoo kuhadlaya Magacayga Iyo magaca Galmudug waxan Marka Hore Uga Tacsiyeynaa […]
Muuse Biixi muxuu ka sasabanayaa Boris Johnson “Hambalyo degdeg ah”.
July 24, 2019 Xafiiska Puntland 5
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doorashada Raysal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska Boris Johnson, kaas oo sheegay inuu soo dhaweynayo Raysal Wasaaraha. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo […]
Akhriso:- Maxay ahayd sababtii loo xiray wariyihii Marqaannews ee deegaanada Puntland?.
July 24, 2019 Xafiiska Puntland 1
Abaare 21:20 habeenkii axada 21st July aniga iyo zxpkeey Cadaani oo aan iska soo raacnay xaafadayda ayaan usoo casho doonanay meherad kutaal laamiga. Markii aan cashada dhamaysanay baa waxaa meherad orod kusoo galay koox dhar […]
Hadhaaga maydka mid ka mid ah shaqaalaha goob laga dukaamayso ayaa laga helay qaboojiyaha alaabta lagu kaydiyo oo ka tirsan goob laga tukaamaysto oo supermarket ah, horaantii sanadkan kaas oo la xaqiijiyey Isniintii inuu yahay […]
Dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka jawaabtay qoraal ka soo baxay wasaaaradda Arrimaha gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa in uusan sax ahayn liiska odoyaasha dhaqanka Jubaland ee uu soo gudbiyay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha […]
Waxaa Saxaafadda kula hadlay xarunta Dowladda Hoose ee Xamar Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo sheegay in ay falkii galabta ay ku dhinteen 6 ruux oo laba ka mid ah […]
Sawiro:- Banaanbax lagu taageerayay mooshinka kasocda Puntland oo kadhacay Garoowe.
Muddaharaad lagu taageerayo mooshin xilka qaadis ah oo Baarlamanka Puntland ka gudbiyay xubnaha Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta ka dhacay magaalada Garoowe. Golaha wakiilada Puntland ayaa la filaya in ay maalinta berriya ka doodan […]
Faahfaahin:- Akhriso magacyada masuuliyiinta la xaqiijiyay dhimashadooda iyo dhaawacyada oo sii kordhay.
AQRISO: Magacyada mas’uuliyiinta dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ee weerarka Aqalka dowladda Hoose. ———————————————————————– Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha qarixii xoogganaa ee gelinkii danbe ee maanta ka dhacay gudaha Aqalka dowladda Hoose […]
Akhriso:- Waa kuma Raiisaĺwasaaraha cusub ee Britain, muxuu kaga duwan mss May?.
Boris Johnson ayaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka ee Ingiriiska Maanta, codbixin ay ka qayb qaateen xubnaha xisbigaasi, waxaana sidoo kale uu noqon doona Raysal-walwasaaraha cusub ee Boqortooyada Ingiriiska. Mr. Johnson ayaa ka guulaystay Jeremy […]
Abwaan Cismaan Cabudllaahi Guure oo kamid ah murti-maalka Soomaaliyeed ahna suxufi rugcaddaaya oo warbaahinno kala duwan ka soo shaqeeyay ayaa sheegay in uu aad ugu riyaaqay amniga iyo xasiloonida ka jirta magaalada Garoowe ee caasimadda […]
July 24, 2019 Xafiiska Puntland 4
Dowladda Puntland ayaa mar kale ku celisay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo eedaymo ku qoran maqaal 22-July lagu daabacay wargeyska New York Times oo dowladda Qatar la xiriiriyay qarax 11-May ee sannadkan ka dhacay […]
Booqashadii reysul wasaaraha Somaliya Xassan Cali Kheyre ee Waqooyiga Galkacyo waxay saameynteedu jiri doontaa inta uu madaxweyne Deni fadhin doono madaxtooyada Puntland!, waayo socdaalkaas wuxuu fariin macaan ka gudbiyay Mudane Kheyre iyo saameynta xukuumaddiisa Nabad […]
July 21, 2019 Xafiiska Puntland 5
July 21, 2019 Xafiiska Puntland 3
Trump oo la sheegay inuusan ka qaybgali doonin doorashada 2020 + Hadal Gaf ah oo uu bixiyay agaasimihiisa Aqalka cad.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isaga bixi doona hardanka loolanka loogu jiro madaxweynaha dalkaasi ee doorashada 2020, sida uu rumaysan yahay sarkaal hore oo katirsanaa aqalka cad. Agaasimihii hore ee xiriirka bulshada iyo warbaahinta […]
Farmaajo oo isbahaysi kadhan ah Axmed Madoobe la samaystay laba madaxwayne oo African ah.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa warbixin dheer ka qoray arrimaha Jubbaland, gaar ahaan doorashada madaxweynaha maamulkaasi oo dhaceysa Khamiista soo socota. Wargeyska ayaa shaaciyey in dalalka […]